March 18, 2020 – Voice of Myanmar
သေသည်ထိ အမှိုက်ကောက်မယ် စစ်ကိုင်းမြို့၊နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်က အသက် ၈၀ အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဦးကြည်ဝင်းဟာ သက်ပြည့်ပင်စင် ယူထားတဲ့ စည်ပင်သာယာဝန်ထမ်း ဖြစ်ပေမယ့် ဒီနေ့အချိန်ထိ အမှိုက်သိမ်းတဲ့တာဝန်ကို သူ့အသိစိတ်နဲ့သူလုပ်နေဆဲပါ။ အမှိုက်စည်းကမ်းမဲ့ပစ်သူတွေရှိနေသမျှ အဘဦးကြည်ဝင်းဟာ အမှိုက်ဆက်ကောက်နေရဦးမယ်ဆိုတာနဲ့ အဘဦးကြည်ဝင်းလိုလူ အများကြီးလိုမလား အမှိုက်စည်းကမ်းမဲ့ပစ်သူတွေ ပပျောက်ဖို့ လိုမလား ? ရိုက်ကူးတင်ဆက် ရှိုင်းအောင်၊ ရန်အောင်ထွန်း #voiceofmyanmar #VOM #ဦးကြည်ဝင်း #စစ်ကိုင်း ေသသည္ထိ အမႈိက္ေကာက္မယ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊နႏၵဝန္ရပ္ကြက္က အသက္ ၈၀ အ႐ြယ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ဦးၾကည္ဝင္းဟာ သက္ျပည့္ပင္စင္ ယူထားတဲ့ စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္း ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ အမႈိက္သိမ္းတဲ့တာဝန္ကို သူ႕အသိစိတ္နဲ႕သူလုပ္ေနဆဲပါ။ အမိွဳက္စည္းကမ္းမဲ႕ပစ္သူေတြရွိေနသမွ် အဘဦးၾကည္ဝင္းဟာ အမိွဳက္ဆက္ေကာက္ေနရဦးမယ္ဆိုုတာနဲ႕ အဘဦးၾကည္ဝင္းလိုုလူ အမ်ားၾကီးလိုုမလား အမိွဳက္စည္းကမ္းမဲ႕ပစ္သူေတြ ပေပ်ာက္ဖိုု႕ လိုုမလား ? ရိုက္ကူးတင္ဆက္ ရွိဳင္းေအာင္၊ ရန္ေအာင္ထြန္း #voiceofmyanmar #VOM #ဦးၾကည္ဝင္း…
ဆောင်းပါး, ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယိုLeaveacomment
မြသိန်းတန်စေတီတော်ရှေ့က ဈေးဆိုင်ခန်းများ ဖယ်ရှားမယ့်အပေါ် ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်များ လက်မခံ
မြသိန်းတန်စေတီတော်ရှေ့က ဈေးဆိုင်ခန်းများ ဖယ်ရှားမယ့်အပေါ် ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်များ လက်မခံ စစ်ကိုင်း၊ မတ် ၁၈-၂၀၂၀ မောင်တာရာ (VOM) စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ မင်းကွန်းဒေသ၊ သမိုင်းဝင်မြသိန်းတန်စေတီတော်ရှေ့က ဈေးဆိုင်ခန်းတွေ ဖယ်ရှားမယ့်အပေါ် ဈေးဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တွေက လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ သမိုင်းဝင်မြသိန်းတန်စေတီတော်ရှေ့က ဈေးဆိုင်ခန်းတွေကို မင်းကွန်းလေးဌာန ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ စစ်ကိုင်းခရိုင်ဒေသဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီတို့က ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြီး အခြားနေရာကို ပြောင်းရွေ့ချထားပေးဖို့ စီစဉ်နေပြီး အဲဒီနေရာကိုတော့ ကားရပ်နားကွင်းလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြသိန်းတန်စေတီတော်ရှေ့က ဈေးဆိုင်ခန်းတွေ နေရာပြောင်းရွေ့ချထားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်း ဖောင်တော်သီကျောင်းတိုက်မှာ မင်းကွန်းလေးဌာန ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ဆရာတော်တွေ၊ စစ်ကိုင်းခရိုင် ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဈေးဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တွေ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ #VOM #voiceofmyanmar #စစ်ကိုင်း #မြသိန်းတန်စေတီ #ဈေးဆိုင်ခန်းတွေဖယ်ရှားမယ် Zawgyi ျမသိန္းတန္ေစတီေတာ္ေရွ႕က ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ား ဖယ္ရွားမယ့္အေပၚ ဆုိင္ခန္းပုိင္ရွင္မ်ား လက္မခံ စစ္ကုိင္း၊ မတ္…
မိုးထက်မြင့်တာဝါတိုင်ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်း ၅ ဦးကို အေအေက ပြန်လွှဲပေး
မိုးထက်မြင့်တာဝါတိုင်ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်း ၅ ဦးကို အေအေက ပြန်လွှဲပေး စစ်တွေ၊ မတ် ၁၈- ၂၀၂၀ ခိုင်လင်စံ (VOM) ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က တပ်မတော်ကလက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်တာကြောင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်ကနေ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ကိုသွားတဲ့ မိုးထက်မြင့်ကုမ္ပဏီက တာဝါတိုင်တပ်ဆင်ရေးဝန်ထမ်း ၅ ဦးကို အေအေက မနေ့မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ပြန်လွှဲပေးလိုက်တယ်လို့ အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။ မိုးထက်မြင့်ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်း ၅ ဦးဟာ တာဝါတိုင်စိုက်ထူတဲ့ကရိန်းကားနဲ့ ဘူးသီးတောင်ဖက်ကို သွားတာမှာ ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ကျောက်တန်းကျေးရွာနားအရောက်မှာ တပ်မတော်ဖက်က လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက် ကြောက်လန့်ပြီး အေအေ ရှိတဲ့နေရာကို လာရောက်ခဲ့တယ်လို့ အေအေကပြောပါတယ်။ ” ကျနော်တို့ မနေ့ကမတ်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်လည်ပြီး ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ ဗမာတိုင်းရင်းသား ၄ ယောက်နဲ့ ကချင်တစ်ယောက် အားလုံး…
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာစစ်တာဝန်များရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့ တက္ကသိုလ်ဆရာသမဂ္ဂများ တောင်းဆို
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာစစ်တာဝန်များရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့ တက္ကသိုလ်ဆရာသမဂ္ဂများ တောင်းဆို ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၈-၂၀၂၀ စွဲ့ဝတီ(VOM) ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုရှိနာဗိုင်းရပ်စ် covid – 19 အွန္တရာယ်ကြောင့် လာမယ့်မတ်လ နောက်ဆုံးအပတ်များမှာစတင်မယ့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာစစ်တာဝန်တွေကိုရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ တက္ကသိုလ်ဆရာသမဂ္ဂကနေ သိရပါတယ်။ Covid – 19 အွန္တရာယ်ကြောင့် အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍစာမေးပွဲများ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာစစ်လုပ်ငန်းတွေကို ရွှေ့ဆိုင်ပေးဖို့သဘောထားကြညာချက်ကို တက္ကသိုလ်ဆရာ/ဆရာမများကိုယ်စားပြုကော်မတီ (Representative Committee of University Teacher Associations – RC of UTAS)က ဒီကနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “အခုလောလောဆယ် တက္ကသိုလ်တွေမှာစစ်နေတဲ့ စာမေးပွဲတွေရှိတာပေါ့။ ဒီနေ့ စစစ်တာပေါ့။ အခြေခံကတော့ စာစစ်တဲ့ကိစ္စတွေ ရှိတယ်လေ။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအဖြေလွှာ စစ်မဲ့ကိစ္စတွေပေါ့။ အဲဒါတွေကို ရွေ့ဆိုင်းဖို့အတွက် ဆရာတို့က တောင်းဆိုတာပါ။ တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲတွေကတော့ တပြေးညီတော့ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့…
ပုသိမ်မြို့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုမီးရှို့မှုနဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးထား
ပုသိမ်မြို့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုမီးရှို့မှုနဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးထား ပုသိမ်၊မတ် ၁၈-၂၀၂၀ ကိုအောင်(VOM) ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့ ၊ အမှတ် ၈ ရပ်ကွက်၊ စန်းကန်ကုန်းရပ်၊ အောင်မင်္ဂလာ ၄ လမ်းမှာ ရှိတဲ့ သာသနာ့အားမန်ဘုန်းကြီးကျောင်းဟာ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ ညပိုင်းကမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းမီးလောင်မှုဟာ သာမန်မီးလောင်မှုမဟုတ်ဘဲ အမျိုးသားတစ်ဦးက မီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက် အဲ့ဒီအမျိုးသားကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးထားပြီး ဒီကနေ့စတင်အမှုဖွင့်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ “ဘုန်းကြီးကျောင်းက လောင်တာမဟုတ်ဘူး၊ အရက်မူးပြီး ကျောင်းကိုမီးရှို့ခံရတာ၊ လောင်တဲ့ ကျောင်းအဆောင်ကတော့ အကုန်ကုန်သွားတယ်၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ သေတာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး” လို့ အမှတ်၈ရပ်ကွက်ရာအိမ်မူး ဦးထွန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ မီးရှို့ခံခဲ့ရတဲ့ သာသနာ့အားမာန် ရှမ်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဟာ ည၁၁နာရီ ၅၀အချိန်ခန့်က မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခရိုင်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က မီးသတ်ယာဉ် ၅ စီး မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅၀ ဦးနဲ့ လာရောက်မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့တာကြောင့်…
စစ်ကိုင်းမြို့နယ်မှာ COVID -19 စောင့်ကြည်လူနာ လေးဦးတွေ့ရှိ
စစ်ကိုင်းမြို့နယ်မှာ COVID -19 စောင့်ကြည်လူနာ လေးဦးတွေ့ရှိ စစ်ကိုင်း၊ မတ် ၁၈-၂၀၂၀ မောင်တာရာ (VOM) စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာနဲ့ ငါ့တရော်ကျေးရွာတို့မှာ COVID -19 စောင့်ကြည်လူနာလေးဦးကို တွေ့ရှိထားတယ်လို့ စစ်ကိုင်းမြို့၊ကုတင် ၂၀၀ ဆံ ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးကနေ သိရပါတယ်။ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာမှာ အသက် ၂၈ ရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး နဲ့ ၎င်း ဇနီးဖြစ်သူ အသက် ၂၈ ရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး တို့ဖြစ်ပြီး၊ ငါ့တရော် ကျေးရွာမှာ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး တစ်ဦးနဲ့ ၎င်းရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား တစ်ဦးတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ”ကျွန်မဆီကို ဒီမနက်ပဲ report ရောက်လာပါတယ် ၊ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ပြန်လာတာ ယောကျာ်းလေးနှစ်ယောက်၊ မိန်းကလေးနှစ်ယောက် ကျွန်မတို့က…
ဇီးကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကို ကိုရိုနာဗိုင်းရက်စ် သတင်းပို့လူနာတစ်ဦးရောက်ရှိ
ဇီးကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကို ကိုရိုနာဗိုင်းရက်စ် သတင်းပို့လူနာတစ်ဦးရောက်ရှိ ဇီးကုန်း မတ် ၁၈-၂၀၂၀ မိုးယံ(VOM) ပဲခူးတိုင်း၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ ဇီးကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ မနေ့မတ်လ ၁၇ရက် ညပိုင်းက ကြို့ပင်ကောက်မြို့ အောင်မြင်မြင့်မိုရ်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကနေ ကိုရိုနာဗိုင်းရက်စ် သတင်းပို့လူနာတစ်ဦး လာရောက်ကုသမှုခံယူနေတယ်လို့ ဇီးကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာဇော်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်။ ဇီးကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရွာတစ်ရွာက အသက်(၂၇)နှစ်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်မြို့ရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရာကနေ မတ်လ၉ရက်နေ့က ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး ချောင်းဆိုနေတဲ့အတွက် ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ရှိ အောင်မြင်မြင့်ရ်အထူးကုဆေးရုံမှာ ရောဂါကုသဖို့ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ‟ဒီလူနာက ယိုးဒယားကပြန်လာတာ (၁၄)ရက်မပြည့်သေးဘူး၊ ကျန်းမာရေးဌာနကချမှတ်ထားတဲ့ သတင်းပို့ရမယ်ဆိုတာနဲ့ ကိုက်ညီနေလို့ သတင်းပို့ထားပါတယ်။ ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ခုကနေ ဒီဇီးကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကို လာတက်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က လောလောဆယ် ကိုဗစ်သံသယလူနာအဖြစ်မသတ်မှတ်သေးဘူး သတင်းပို့လူနာအဆင့်ဘဲရှိပါသေးတယ်၊ ဆေးရုံမှာ သီးသန့်ခန်းနဲ့ထားပါတယ်”လို့ ဇီးကုန်းမြို့နယ် ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်။ မတ်လ ၁၇ရက်ကလည်း ပဲခူးမြို့ အောင်ဆေးရုံကနေ…
ပလက်ဝအတွင်းက ရွာတွေကို တပ်မတော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ပြီး အရပ်သား ၂၁ ဦးသေဆုံးမှု CNLDအဖွဲ့ကရှုံ့ချ
ပလက်ဝအတွင်းက ရွာတွေကို တပ်မတော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ပြီး အရပ်သား ၂၁ ဦးသေဆုံးမှု CNLDအဖွဲ့ကရှုံ့ချ စစ်တွေ၊ မတ် ၁၈- ၂၀၂၀ ခိုင်လင်းစံ (VOM) ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၄ရက်နဲ့ ၁၅ ရက်နေ့တွေက တပ်မတော်ကနေပြီး ကျေးရွာ ၅ ရွာလောက်ကို လေကြောင်းကတဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် အရပ်သား ၂၁ ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကို ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် CNLD ကပြန်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံ့ချကြောင်း မနေ့ မတ်လ(၁၇)ရက်နေ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က ပလက်ဝမြို့နယ် မိတ်စာ(၁) မိတ်စာ(၂)နဲ့ မိတ်စာ (၃) ကျေးရွာတွေဟာ တပ်မတော်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် နေအိမ်တွေအများအပြား မီးလောင်သွားပြီး၊ အရပ်သား (၁၂) ဦးသေဆုံးကာ (၁၅) ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိကြောင်းနဲ့ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာလည်း ထပ်မံလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဝက်မကျနဲ့ ပြိုင်တင်ကျေးရွာတွေက…
ဧရာဝတီသတင်းဌာနရဲ့ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှု တပ်မတော်ဖက်က အပြီးသတ်ရုတ်သိမ်း
ဧရာဝတီသတင်းဌာနရဲ့ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာကို တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှု တပ်မတော်ဖက်က အပြီးသတ်ရုတ်သိမ်း ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၈-၂၀၂၀ ကိုထွန်း၊ လင်းခိုင် ရခိုင်သွားသတင်းထောက်တယောက်ရဲ့ မြောက်ဦးမှတ်တမ်းဆောင်းပါးကို ဧရာဝတီမြန်မာပိုင်းမှာရေးသားဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီသတင်းဌာနက တာဝန်ခံအယ်ဒီတာဦးရဲနည်ကို တပ်မတော်က ၆၆(ဃ)နဲ့ တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုအား ဒီကနေ့မှာ တပ်မတော်ဖက်ကနေ အမှုကိုအပြီးသတ်ရုတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ “အဓိကကတော့ သတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံကြားဝင်မှုကြောင့်ရယ်၊ စတုတ္ထမဏ္ဏိုင်အနေနဲ့ ဘက်မလိုက်ပဲ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နိုင်စေရေး၊ ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ သတင်းကိုမှန်ကန်မျှတစွာ ရေးနိုင်စေရေး၊ မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ မီဒီယာအနေနဲ့လည်း တပ်မတော်ရဲ့သတင်းတွေကိုရေးရင် ပြည်သူလူထုထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် မရေးဖို့အတွက်တော့ ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အမှုကို အပြီးသတ်ရုတ်သိမ်းလိုက်တာပါ၊ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လူတိုင်းကိုလည်း တရားမစွဲဘူး ၊ ပြည်သူလူထုကို ထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်စေမယ့် အရာတွေကိုတော့ ထိုက်သင့်တဲ့ဥပဒေအရဆောင်ရွက်သွားဖို့တော့ ရှိပါတယ်”လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက VOMကို အတည်ပြုပြောပါတယ်။ တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ ဧရာဝတီသတင်းဌာနက တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ဦးရဲနည်ကိုကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာတော့ “ဘာမှအကြောင်းကြားတာမရှိသေးတော့၊ သေချာမသိရသေးဘူး။…